I-Testosterone Cypionate (i-test cyp) ipowder (58-20-8) hplc =99% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Testosterone Cypionate (I-cyp yovavanyo) powder
5.00 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 2 amanqaku umthengi
SKU: 58-20-8. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwi-gram ukuya kwi-mass order ye-Testosterone Cypionate (i-Test cyp) ipowder (58-20-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Testosterone Cypionate (i-test cyp) ividiyo ye powder
I-Raw Testosterone Cypionate (i-cyp yovavanyo) i-powder Basic Characters
igama: I-Testosterone Cypionate (i-cyp yovavanyo)
I-Raw Testosterone Cypionate (I-cyp yovavanyo) I-powder Ukusetyenziswa kumjikelezo we-steroids
I-Testosterone Cypionate ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-Test Cyp, i-Cypionate, iDepo-Testosterone, ngamalungu omzimba okanye abakwa-UGL.
I-Testosterone ye-Cypionate powder Use Raw
I-Testosterone Cypionate (i-cyp Test) ipowder isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengeoli ejoyiweyo. Kwimarike, kukho i-200mg / ml, i-250mg / ml, i-300mg / ml, i-UGL ethile yenze i-350mg / ml kunye ne-400mg / ml. Kodwa, kuya kuba namandla kakhulu
Isilumkiso kwi-Raw Testosterone Cypionate powder
Uvavanyo lwe-cyp powder
I-Testosterone Cypionate inokukhuthaza imiphumo ye-dihydrotestosterone (DHT) enxulumene ne-acne, ukulahleka kweenwele kunye ne-prostate yokwandisa; nangona kunjalo, kufanelekile ngaphandle kokuthi i-DHT steroids iya kuba yinto ephambili. Ukulungiselela ukukhusela, i-5-alpha reductase inhibitor efana ne-Finasteride inokunceda njengoko i-androgen iphineli kwaye i-androgen DHT ibangela ingxaki. Kufuneka kuqatshelwe; Ukulahleka kweenwele kuyenzeka kuphela kumadoda athatyathwa kwindoda yesimo somntu.
I-Testosterone Cypionate Raw Powder
I-Raw Testosterone Cypionate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Testosterone Cypionate powder evela kwi-AASraw
I-AASRAW Abadlali abaninzi babonisa amandla amaninzi ngelixa basebenzisa i-Testosterone Cypionate ekusebenzeni.
Uvavanyo lwe-cyp powder I-Raw Powder Recipes